I-American Black Bear - i-Ursus americanus
Igama lezesayensi: Ursus americanus
Ibhere elimnyama laseMerika (i- Ursus americanus ) liyi-carnivore enkulu ehlala emahlathini, amaxhaphozi, i-tundra kuyo yonke indawo efikelela kwimntla yeNorth America. Kwezinye iindawo ezifana nePacific Northwest, ngokuqhelekileyo zihlala kwimida yeedolophu kunye namadlelo apho kwaziwa khona ukuba igqitywe kwizakhiwo zokugcina okanye iimoto ekufuneni ukutya.
Iibhere eziMnyama zingenye yeentlobo zeebhere ezintathu ezihlala eNyakatho yeMerika, enye enye ibini ibhere elimnyama kunye nebhere le-polar.
Kulo hlobo lweebhere, iibhere ezimnyama zincinci kwaye zininzi. Xa udibana nabantu, iibhere ezimnyama zihlala zibalekela kunokuhlaselwa.
Iibhere eziMnyama zinemilenze enamandla kwaye zixhotywe ngamacwecwe amfutshane abenza ukuba bahlule izigodo, benyuke imithi baze baqoke iigrub neebhubu. Baye baqhekeze iinyosi kunye nokutya kwi-honey and aees.
Kwiindawo eziqinileyo zoluhlu lwazo, izibhere ezimnyama zifuna ukukhusela kwindawo yazo ebusika apho zingena ebuthongweni busika. Ukulala kwabo akuyiyo inyani, kodwa ngexesha lokulala kwabo ubusika musa ukutya, ukusela okanye ukuchitha inkunkuma kwiinyanga ezixhenxe. Ngeli xesha, i-metabolism yabo iyancipha kwaye ixabiso lentliziyo liyawa.
Iibhere eziMnyama zihluka ngokugqithiseleyo kumbala kulo lonke uluhlu lwazo. Empuma, iibhere zivamnyama zimnyama. Kodwa entshonalanga, umbala wabo uguquke kwaye unokuba ngumnyama, umdaka, umninam okanye okanye umbala ogqithisileyo.
Phakathi kolunxweme lwaseBrithani Columbia neAlaska, kukho imibala emibili yamabhere amnyama ahluke ngokwaneleyo ukufumana ama-noun name: "i-Kermode bear" okanye "ibhere emoyeni" kunye nebhedi eluhlaza okwesibhakabhaka "ibhere le-glacier".
Nangona ezinye iibhere ezimnyama zingabombala njengeebhere ezibomvu, zintlobo ezimbini ziyakwazi ukwahlukana nokuba iibhontshisi ezimnyama zincinci ziluhlu lwezinto ezinobuninzi beebhere.
Iibhere eziMnyama nazo zineendlebe ezinkulu ezimileyo ngakumbi kuneeebhere ezibomvu.
Iokhokho zamabhere amnyama aseMerika kunye namabhere amnyama ase-Asiya ahlukeneyo kwihlokho lelanga lanamhlanje athwala i-4.5 yezigidi zeminyaka edlulileyo. Okhokho beebhere ezimnyama kubandakanya ukuphela kwe- Ursus abstrusus kunye ne- Ursus vitabilis ezaziwa kwiimfuyo ezifumaneka eNyakatho Melika.
Iibhere eziMnyama zi-omnivores. Ukutya kwabo kubandakanya utshani, amajikijolo, iisantyambo, iziqhamo, imbewu, inambuzane, iintsholongwane ezincinci kunye ne-carrion.
Iibhere eziMnyama zilungelelaniswa kwiindawo ezininzi zokuhlala kodwa zithatha ngakumbi kwiindawo ezikhethiweyo zehlathi. Uluhlu lwazo lubandakanya iAlaska, eCanada, eUnited States naseMexico.
Iibhere ezimnyama zivelisa ngesondo. Bafikelela ekuvuthweni kokuzala xa beneminyaka engama-3 ubudala. Ixesha labo lokuzalisa lenzeka entwasahlobo kodwa i-embryo ayifaki kwisibeleko sikamama kude kube sekupheleni kokuwa. Iibini ezimbini okanye ezintathu zizalelwa ngoJanuwari okanye ngoFebruwari. Iibhokhwe zincinci kwaye zichitha iinyanga ezizayo zongikazi kwindawo yokukhusela. Iibhokhwe zivela kwideni kunye nomama wazo entwasahlobo. Bahlala phantsi koxhaswa ngumama wabo de kube malunga ne-1½ ubudala ubudala apho bachitha khona ukufuna indawo yabo.
Ubukhulu kunye nobunzima
Malunga no-4-6-foot feet kunye ne-120-660
Amabhere amnyama aseMelika ahlelwa ngaphakathi kwinqanaba elilandelayo lolawulo:
Izilwanyana > Iikholam > Iimpawu ezixhamlayo > I- Tetrapods > Amniotes > Izilwanyana> Izilwanyana> Izibhere> Amabhere amnyama aseMerika
Izihlobo eziphilileyo ezithandwayo zamabhere amnyama zi-black black bears. Okumangalisa kukuba, ibhere elimnyama kunye neebhere le-polar alihambelani ngokubhekiselele kwiibhere ezimnyama njengeendlebe ezimnyama zaseAsia naphezu kobuninzi beendawo zabo.
7 Amaqhosha amaCopard seal
Amanqaku angama-20 amakhulu kakhulu
Iinqununu ezi-5 eziphambili zeeNkathazo
Iintyatyambo zoMtshato zaseChina
Iintetho ezihlangeneyo Ziyodwa kodwa zivame ukuba neenjongo ezininzi
Miserere mei, Deus Iingoma kunye nesiNgesi Translation
Ziziphi i-Florida Lovebugs?
Imbali emfutshane ye-Skateboarding
Ihlobo Elibomvu ngowe-1919
Indlela yokuSondeza i-Smart: i-Hamilton
Ngaba Abantu Bokuba NgamaZulwini Emva Kokufa?
I-Composition Composition of Road Road
12 I-Crude But Funny I-Funny Park Quotes Awufuni Ukufunda
Iindawo ezininzi zeHlabathi
Yintoni i-Logomisia (i-Word Aversion)?
Ngaba Ukuphepha Amanzi Kuya Kubi?
Ukufundisa Abafundi abane-Down Syndrome
Ukufumana iimeko zokubuyiselwa kweeNkcazo kunye nokuBala kwakhona